Social media, beyond fun and games
What the heck is going on in Myanmar
Rita Nguyen, Founder
Social media doesn't always have to be used for entertainment. Here are some examples where social media is being used in developing and emerging markets to promote human development.
Presented at the Myanmar Blogger's Forum.
Social	Media:	Beyond	the	fun	and	games	Rita	Nguyen	CEO,	SQUAR	2.
Social	Media	3.
Social	Media	4.
Social	Media,	the	great	equalizer	သတင်းအချက်အလက်များ ဖန်တီး မျှဝေနိုင်ခြင်း
Create	&	share	informaAon	နေရာတိုင်းမှ အကျိုးသက်ရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
Access	is	virtually	ubiquitous	ဗဟုသုတ များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ဝေမျှနိုင်ခြင်း
Knowledge	is	shared	real	Ame	သတင်းအချက်အလက်များသည်
InformaAon	is	relevant	6.
Social	Media	Applica7ons	ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ နဲ့ ပတ်သတ်ဆက်နွယ်နေတဲ့
အဓိကအချက် ၃ ချက် :	Focus	on	three	main	issues	which	are	relevant	to	Myanmar	today:	၁။ သတင်းအချက်အလက် Informa7on	၂။ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု
Healthcare	၃။အလုပ်အကိုင်	Employment	7.
လယ်သမားတွေကို စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့
သတင်းအချက်အလက်တွေပေးခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ပြီး ၀င်ငွေ
တိုးလာမယ်။	Provides	farmers	with	relevant	agricultural	informaAon	to	improve	producAvity	&	increase	income	•  အရေးအဖတ်အားနည်းတဲ့ သူတွေထိရောက်ရှိနိုင်မဲ့ အသံ Forum •  Voice	forum	to	address	low	literacy	rates
•  ဖုန်း	•  Phone-­‐in	operator	•  အခြား လယ်သမားတွေရဲ့ အမေး အဖြေများကို ရှာဖွေဖတ်ရှုခြင်း	•  Browse	other	farmer’s	quesAons	and	answers	•  ဈေးနှုန်း၊ ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း၊ ပိုးမွှားကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း စတဲ့
သတင်းအချက်အလက်တွေ ဝေမျှခြင်း •  DistribuAng	informaAon	–	pricing,	producAvity,	tackling	pests,	etc	Farmerline	(Ghana)	9.
Health	Care	10.
myHealth	(Botswana)	ရောဂါဝေဒနာ အထူးသဖြင့် ငှက်ဖျား စတဲ့ ရောဂါများအကြောင်း သိနိုင်မဲ့
ကျန်းမာရေး ၊သန့်ရှင်းမှု နဲ့ ဆိုင်တဲ့ App	Health	&	sanitaAon	app	to	address	diseases,	especially	malaria.	•  မိုးလေ၀သ အကြောင်း ကြိုတင်သတိပေးချက်များ ပေးနိုင်ခြင်း၊
ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း	•  Provides	climate	informaAon,	early	warning	alerts,	and	health	monitoring	•  ရောဂါပြောင်းလဲမှု ပုံစံများ၊ အခြား အရေးပေါ်ကျန်းမားရေး
အခြေအနေများကို သုံးစွဲသူများ လိုက်လျောညီထွေစွာ သိရှိနိုင်ခြင်း	•  Helps	users	adapt	to	shiSing	paTerns	of	disease	and	other	health	emergencies	•  ရောဂါလက္ခဏာ နှင့် ကုသမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များပေးခြင်း •  InformaAon	about	symptoms	&	treatments	•  ဆရာဝန် နှင့် တွေ့ဆုံရန် အချိန်ညှိနိုင်ခြင်း	•  Schedule	doctor	appointments	11.
Babajob	(India)	အကြီးမားဆုံးသော အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး	Largest	entry	level	job	search	in	India	•  အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေသူများ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို Offline
မှတ်သားထားနိုင်ခြင်း	•  Oﬄine	locaAons	for	job-­‐seekers	to	set	up	proﬁles	•  အလုပ်ရှာသူများ နှင့် အလုပ်ရှင်တို့ အကြား ဆက်သွယ်ပေးမည့်
ကိုယ်စားလှယ်အဆက်အသွယ် များ	•  Mentor	program	–	agents	network	to	connect	seekers	with	employers	•  အလုပ်အကိုင် အခွင့်အရေးကို စာတိုဖြင့် အချက်ပေးနိုင်ခြင်း၊
တုံ့ပြန်နိုင်ခြင်း •  SMS	job	alerts	and	responses	13.
RITA	NGUYEN	MySquar.com	info@mysquar.com	@moodyrain	We’re	hiring!	Recommended
SQUAR Start Up Lessons